सरकारको पछिल्लो गतिबिधिले ब्यापारी वर्ग रुष्ट छ: महासचिव महासेठ – खोज केन्द्र
» अन्तर्वार्ता » अर्थ » ब्लग » समाचार अंक: 2011
सरकारको पछिल्लो गतिबिधिले ब्यापारी वर्ग रुष्ट छ: महासचिव महासेठ
खोज केन्द्र बुधबार, फाल्गुण ०७, २०७६ मा प्रकाशित
जनकपुरधाम प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी छन् । प्रदेश २ का सबै भन्दा पुरानो सहरको रुपमा स्थापीत रहेको जनकपुरधाम आर्थिक हिसाबले प्रदेशकै ‘हब’ को रुपमा विकास भइरहेको छ । धार्मिक प्रर्यटकको लागि सबै भन्दा सुन्दर गन्तव्य पनि मानिन्छ, जनकपुरधाम । पर्यटकीय सम्भावना भएकै कारण यस क्षेत्रमा सोही अनुसार विभिन्न साानादेखि ठुला व्यवसायहरु फस्टाइरहेको छ, लगानीकर्ता उत्साहित भएर लगानी पनि गरिरहेका छन् । धमाधम ठुला–ठुला होटलदेखि सपिङ मलहरु सञ्चालनमा आउन थालेका छन् ।
विगतमा भएको मधेश आन्दोलन र त्यस लगत्तै एशियाली विकास बैंक (एडीबी) परियोजना अन्तरगत भएको सडक विस्तारले व्यवसायीहरु निकै प्रभावित भएका थिए । तर, चालु आर्थिक वर्षदेखि नै सुरु हुने भनिएको रेल सेवा र प्रदेशको राजधानी हुने राजनीतिक सहमती भएपछि व्यवसायीहरुमा थप असा पलाएको छ । त्यसै अनुसार व्यवसायीहरु व्यपारमा धमाधम लगानी गरिरहेका छन् ।
नेपाल सरकारले २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरी २० लाख पर्यटक भित्रियाउने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक विकासका लागि पर्यटक एकदमै महत्तवपूर्ण हुन्छ । पर्यटकीय कोरीडोर बनाउन यहाँका व्यवसायीहरु तयार रहेपनि प्रदेश र स्थानीय सरकार त्यस तर्फ अग्रसर नदेखाएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । भ्रमण वर्षमा जनकपुरधाममा ५ लाख भन्दा बढी पर्यटक ल्याउने दावी सरोकार बला निकायको छ । प्रस्तुत छ, जनकपुरधाममा व्यवसायको अवस्था, सम्भावना, अवसर, चुनौती लगायत बारे जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव जितेन्द्रप्रसाद महाशेठसँग कुराकानीको संपादित अंश ।
जनकपुरधाममा व्यपार÷व्यवसायीको अवस्था के छ ?
जनकपुरधाममा अहिले सम्म सबै क्षेत्रको व्यवसायी संतुष्ट हुन सक्ने अवस्था आएको छैन् । कुनै–कुनै क्षेत्रको व्यवसायी अझै प्रभावित नै छन् । विगतको तुलनामा व्यपार बढेको छ । ठुला उद्योग धन्दादेखि साना उद्याग व्यसाय फस्टाइरहेको छ । व्यवसाय फस्टाउँदै गर्दा उनीहरुमा प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ । विगतमा ६ महिना लामो भएको मधेश आन्दोलन र त्यस लगत्तै भएको सडक विस्तारले व्यवसायी निकै मारमा परेका थिए । त्यसता अवरोधबाट मुक्त भई सेवाग्राहीको सेवामा व्यवसायी अहिले अग्रसर भएका छन् ।
पछिल्लो समय भोगेका समस्याबाट ऋणी बनेका व्यवसायीहरु आर्थिक उपार्जन तर्फ लम्किरहेको छ । विभिन्न कारण यहाँको व्यवसायीहरुको अवस्था दयनिय देखिएपनि केही क्षेत्रका व्यवसायीहरुको व्यवसाय संतोषजनक छ । भारतिय बजार नै जनकपुरधामको व्यवसाय फस्टाउनमा बाध्क बनिरहेको छ । भारतिय बजार जनकपुरधामको बजार प्रवद्र्धन गर्न बेलाबेला चुनौतीको रुपमा आइरहेको छ ।
भारतिय बजार कसरी चुनौतीको रुपमा आएको छ ?
जनकपुरधामबाट भारतिय बजार नजिकै छन् । व्यवसाय हुने मुख्य सिजनमा सेवाग्राहीहरु विवाह र मठमन्दिरको नाममा सम्बन्धित पालिकाबाट सिफारिस लिएर लाखौंको समान भन्सारछलि गरी ल्याउनछन् । अव विभिन्न उपभोक्ता र स्थानीय त्यसलाई स्कुलिङको रुपमा लिएको छ । र, घरमा विवाह नभएपनि सिफारिस लिएर भारतिय बजारबाट नै समान खरिद गरी ल्याउँछन् । त्यो नै जनकपुरधामको व्यवसायीको लागि चुनौती छन् ।
यहाँ व्यवसाय फस्टाउने अधारहरु के छन् ?
यहाँको व्यवसायको प्रमुख तीन वटा अधारहरु छन् । प्रदेशको राजधानी, रेलसेवा र पर्यटकीय गनतव्य । यसलाई व्यवस्थापन र एक अर्कासंग सहकार्य गर्न सकियो भने यहाँ व्यवसायको निकै सम्भावना छ । रेल सञ्चालनमा आएपछि यहाँको बजारमा भिँडभाड बढ्छ । भिँडभाड बढेपछि बजार व्यवसाय फस्टाउछन् । बजार स्स्तो हुन्छ, स्स्तो भएपछि बजार पनि ह्वातै बढछ र त्योसंगै बजार व्यवसायको विकास हुन्छ । व्यवसाय फस्टाएपछि रोजगारीका अवसरहरु समेत सिर्जना हुन्छ । जनकपुरधाममा धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरु भएकोले यहाँ पर्यटकहरुको आगमन हुन्छ त्यस्ले बजार प्रवद्धर्न हुन्छ ।
भ्रमण वर्षमा पर्यटक भित्र्यिाउने के योजना छ ?
भ्रमण वर्षमा पर्यटक बढाउने मुख्य भुमिका सरकारको हुन्छ । सबै भन्दा बढी स्थानीय सरकारको । तर सरकारबला निकाय त्यस तर्फ उदासिन देखिएको छ । भ्रमण वर्षको लागि विभिन्न समति उपसमिति बनाएको छ । तर, त्यसमा व्यवसायीको प्रतिनिधित्व छैन् । हामीसंग अहिले सम्म कुनै छलफल, सहकार्य गरेको छैन् । यद्यपी हामी व्यवसायीहरुले पर्यटकको लागि केही ‘प्याकेज’ ल्याउने सोच बनाएका छौं । सरोकार बला निकायसंग छलफल गरी छिट्टै त्यसको टुङ्गो लगाउ छौं । यहाँको व्यवसायी जनकपुरधामलाई पर्यटकिय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न गम्भिर छन् । जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघ पनि त्यसप्रति गम्भिर छ ।
जनकपुरधामको होटेलले सेवा राम्रो नदिएको सुनिन्छ छ नी ?
हो, केही होटल व्यवसायीले स्तरीय अनुसारको सेवा नदिएको, सेवाग्राहीलाई ठगेको सुनिन्छ । हामी त्यसता व्यवसायीको पहिचान गरिसकेका छौं । वहाँहरुसंग छलफल गरिरहेका छौं समस्या समाधानको निमित । तर, सबै होटल व्यवसायी त्यसतै छैन् । कतिपय व्यवसायीले नियुनतम शुल्कमा फस्ट कलासको सेवा दिएके उदाहरण पनि छ हामीसंग । जनकपुरधामलाई बदनाम गर्ने केही तत्वहरु नै लागेको छ । जसले जनकपुरधाममा भएको सानो विषयलाई ठुलो बनाएर बदनाम गरिरहेको हुन्छ ।
जनकपुरधामको सन्दर्भमा केही होटल अभाव देखिएपनि विगतको तुलनामा ठिकै अवस्था छ । २ हजार मानिस मज्जाले अटाउने सक्ने क्षमता छ । यो एक वर्ष पूरानो विवरण छन् यो बिचमा कति होटेल थप पनि भएको छ । त्यसकारण खाशै अभाव त छैन, महोत्सव र मेलाको बेला अभाव देखिन्छ । दर्जनौं होटेल निर्माणको क्रममा छ । केही दिन भित्रै होटल अभावको समस्या समाधान हुन्छ ।
यहाँकोे बजार अन्य ठाउँ भन्दा महँगो छ नी ?
यो सरासर गल्त प्रचार छ । नेपालमा बसेर भारतिय बजारसंग तुलना गर्दा केही मह्गो देखिन्छ । त्यो नेपालको अन्य ठाउँ भन्दा सस्तो नै छ । मैले अघि पनि भने जनकपुरधाम प्रति गल्त दृष्टिकोण भएका व्यक्तिले गरेको गल्त प्रचार हो । यहाँ सबै स्त्तरको समान÷होटल छन् । जस्तो समान त्यस्तै शुल्क निर्धारण छ ।
मनपरी पैसा असुलेको देखिन्छ ?
व्यवसायीले कसैसंग बढी शुल्क लिएको छैन् ।